Imerintsiatosika Tratra ireo jiolahy raindahiny
Jiolahy raindahiny amin’ny fanafihana mitam-piadiana folo no fantatra tetsy amin’ny kaominina Imerintsiatosika.
Fito no efa voatazona ankehitriny, ny telo ambiny mbola karohina dia i Haja mainty, Vonjy ary Naivo Pasteur. Raha ny fampitam-baovao nomen’ny zandarimariam-pirenena, mba ahafahana misambotra azy ireo dia niditra tamin’ny tetikady manokana nanomboka ny 13 mey hatramin’ny 18 mey lasa teo, hoy ny lehiben’ny borigadin’ny zandarimariam-pirenena, komandà Aubin Janvier. Lasibatr’ireo jiolahy ny omby 26 tao an-tanàna. Lehilahy iray antsoina hoe Aimé kosa no ambaran’ny mponina fa tena jiolahy raindahiny amin’ireto tambajotra ireto. Tsy mahasahy mitory anefa ny mponina noho ny tahotra saingy tsy nipetra-potsiny ireo zandary fa nanao ny ezaka ka nahatrarana ity vokatra ity, hoy hatrany ny fanazavana.